တချို့ကယူရို Save ပြီးတော့တစ်ဦးကရထားပြီးတော့ခရီးသွားဥရောပယူပါ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > တချို့ကယူရို Save ပြီးတော့တစ်ဦးကရထားပြီးတော့ခရီးသွားဥရောပယူပါ
အတိတ်ကာလကျော် 10 နှစ်ပေါင်း, သန်းပေါင်းများစွာကမီးရထားယူသည်မည်မျှအကျိုးရှိနေသေးတယ်ပါပြီ! စိမ်းလန်းသော၏ကြွယ်ဝသောလယ်ကွင်း, တောက်ပကမ်းရိုးတန်း, နှင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့တောင် ကျောက်တန်း ခရီးသွားခြင်းဘရိုရှာများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များတွင်ဘယ်သောအခါမျှဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ. ရထားယူပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, အဆင်ပြေ, နှင့်အမှတ် A မှအမှတ် B မှရရန်ပိုက်ဆံအိတ် - အဆင်ပြေနည်းလမ်း, ဒါနှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားကြဘူး, ရထားယူ!
ဥရောပ၌ရထားများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရထားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယအကြီးမြတ်သောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်မည်မျှဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေနိုင်သနည်း. အဲဒီမှာဤမျှလောက်များစွာသောများမှာမသာ စျေးပေါနေရာများ ကနေရှေးခယျြဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ခုတ်လှဲဖို့မရေမတွက်နိုင်သောနည်းလမ်းများ. ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာမကြာမီမီးရထား hit မှတမ်းတနေလျှင်, ဤနေရာတွင်သုံးစွဲဖို့အနည်းငယ်ကြီးမြတ်အကြံပေးချက်များများမှာ:
အဆိုပါလုပ်ပါမှအခြို့သောအချိန်ကိုယူ သုတေသနနှင့်စီမံကိန်း သင်ရထားယူမတိုင်မီ
အများဆုံးကိစ္စများတွင်သင်တစ်ဦးရထားယူသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ထဲကအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်(s ကို) တစ်ဦးအမြန်အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးနှင့်အတူ. ဖြစ်နိုင်လျှင်ကြိုတင်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်. လက်မှတ်စျေးနှုန်းများနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းယခုနှစ်ဘယျအခြိနျ Check, သငျတို့သသူတို့အားအထူးလျှော့စျေးများအတွက်မြျှောပေါ်မှာဆိုရင်သေချာအောင်. အများအားဖြင့်, နိုင်ငံတိုင်းများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာ option ကိုအချို့မျိုးရရှိနိုင်ကြလိမ့်မည် လက်မှတ်ဝယ်ယူ. ဒါကြောင့်, သင့်ရဲ့သုတေသနပြုပါ! ဒီကတဆင့် Read ဘလော့ဂ် မတူညီသောရွေးချယ်စရာပိုမိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာမှ.
ရထား Toulouse မှ Montpellier
ရထား Toulouse မှ Marseille
သငျသညျဖွစျစေ ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်သောကျောင်းသားတစ် ဦး ဒါမှမဟုတ်ရထားကိုနေ့စဉ်စီးသွားတဲ့ပုံမှန်ခရီးသည်, ရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်နေသောအလားအလာနီးပါးဝက်အတွင်းနေရာထိုင်ခင်းပေါ်သုံးစွဲငွေကိုခုတ်လှဲနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင်သည်အခြားတမြို့အတွက်အိပ်ပျော်နှင့်နိုးထလွန်းအဖြစ်အချိန်ကုန်သက်သာဖို့မယုံနိုင်စရာလမ်းဖွင့်. သူကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, ညဥ့်ရထားနေရာထိုင်ခင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ရဲ့.
အကောင်းဆုံးအခန်းရှိသည်သောရထားများမှာ. သငျသညျသီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်ကုလားကာနှင့်အတူတစ်အိပ်ရာဖွဲ့စည်းရန်ရထားယူသောအခါထိုင်ခုံအတူတူဆွဲနိုင်ပါတယ်. နောက်တစ်ခုရှိပါတယ် couchettes, ဈေးအပေါဆုံးနှင့်အများဆုံးကျယ်ပြန့် option ကို. ဤရွေ့ကားအခန်းပေါင်းလေးခြောက်လမှဉျြးကဉျြးရှိသည်နှင့် unisex များမှာ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ privacy ကိုနည်းနည်းယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ရှိသည်. နောက်ဆုံးနဲ့စျေးအကြီးဆုံး option ကိုအိပ်ပျော်ဖြစ်ပါသည်. ဒီတစ်ခု ပို. အဆင်ပြေနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ပါသည်, ရှေးခယျြစရာအပေါငျးတို့သနေဆဲဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း.
အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာအပေါ် Save နှင့် A ရထားကိုယူ
သင့်ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်ထုပ်ပိုးဝေးကလည်ဖို့စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. မတူတာက ပုံမှန်ခရီး ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ကားဖြင့်, သင်တစ်ဦးရထားယူသည့်အခါ သင်အမှန်တကယ်အငြိမ့်ကိုစားနိုင်ပါတယ်. အများစုကထိုင်ခုံနှစ်ခုထိုင်ခုံအကြားတစ်ဦးဆွဲထွက်စားပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ် fixed စားပွဲပေါ်မှာရှိ. သို့သျောလညျး, သငျသညျမှရှိပါက သင့်ရဲ့အစာကိုဝယ် နှင့်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းအဖျော်ယမကာ, အဆင်ပြေပါတယ်. ရထားပေါ်တွင်တစ်ဦးကမုန့်ညက်အလွန်အမင်းစျေးကိုအဆမတန်မြှမဟုတျပါဘူးနှင့်သင်မကြာခဏဈေးလျှော့ပေးကြောင်းကတ်များများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ဘော်ဒိုး Nantes မှရထား
ရထားဖြင့်သင့်လမ်းခရီးဘို့စီစဉ်သင်သည်သင်၏ခရီးသွားရန်ပုံငွေထဲကအများဆုံးလုပ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်! အကောင်းတစ်ဦး connection ကိုရှာဖွေခြင်းမကြာခဏနိုင်ပါတယ် လေယာဉ်ဖမ်းသည်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာ, နှင့် ကားဖြင့်ခရီးသွားလာထက်ပိုမိုအဆင်ပြေ. ဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုအားလပ်ရက်ကြွယ်ဝစေလိမ့်မည်ဟုထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်တစ်ဦးရထားစီးပါ!
မှတစ်ဦးကရထားကိုယူ Save-A-ရထား, သင်၏ ဦး တည်ရာကိုရွေးချယ်ပါ, နှင့်ရထားကိုဥရောပရှိစျေးကွက်ရှိစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူပါ! နှင့်, ဘာလို့ထင်လဲ? သငျသညျကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ရသည့်အခါ, အဆိုပါဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုအတွင်းပြု3မိနစ်များ, ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး အောက်ပါအတိုင်းအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#အိပ်မက်ဆိုး #traveleurope မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ traveltips